Anton'ny fanantenana - Fiangonan'Andriamanitra manerantany Soisa
lahatsoratra > toriteny > Antony ahazoana fanantenana
Tantaran’ny fanantenana kivy ny Testamenta Taloha. Manomboka amin’ny fanambarana fa noforonina araka ny endrik’Andriamanitra ny olombelona. Tsy ela anefa dia nanota ny olona ka noroahina hiala amin’ny Paradisa. Fa niaraka tamin'ny teny fitsarana dia tonga ny teny fampanantenana - Andriamanitra nilaza tamin'i Satana fa ny iray amin'ny taranak'i Eva hanorotoro ny lohany (1. Mosesy 3,15). Ho avy ny mpanafaka.
Mety nanantena i Eva fa ny zanany voalohany no ho vahaolana. Saingy i Kaina - ary anisan'io olana io izy. Nitohy ny ota ary niharatsy izany. Nisy vahaolana fizaram-parany tamin'ny andron'i Noa, saingy nitohy ny fanjakan'ny ota. Nanohy nanana olana ny zanak'olombelona, ​​nanantena zavatra tsara kokoa, nefa tsy afaka nahatratra izany mihitsy.
Ny fampanantenan-tena sasany dia natao tamin'i Abrahama. Saingy maty izy talohan'ny nahazoany ny fampanantenana rehetra. Manan-janaka izy nefa tsy misy firenena ary tsy mbola notahiana ho an'ny firenena rehetra izy. Saingy nijanona ilay fampanantenana. Nomena an’i Isaka koa izy io, taorian’i Jakoba.
Nifindra tany Ejipta i Jakoba sy ny fianakaviany ary tonga firenena lehibe, nefa nogadraina izy ireo. Tsy nivadika tamin’ilay fampanantenany anefa Andriamanitra. Nentiny avy tany Ejipta tamin'ny fahagagana izy.
Saingy ny firenen'Israely dia tsy ampy firy amin'ilay fampanantenana. Tsy nisy fahagagana. Tsy nanampy ilay lalàna. Nanohy nanota izy ireo, nanohy nisalasala, ary nanohy ny diany tany an-tany foana nandritra ny 40 taona. Fa nahatoky tamin'ny fampanantenany Andriamanitra, dia nitondra azy ireo nankany amin'ny tany Kanana nampanantenaina ary nanome azy ilay tany eo ambanin'ny fahagagana maro.
Tsy nandamina ny olany anefa izany. Mbola olona mpanota mitovy ihany ihany izy ireo ary mitantara amintsika ny sasany amin'ireo fahotana ratsy indrindra. Andriamanitra farany dia namabo ny foko avaratra tao Asyria. Mety hisy hieritreritra fa mety hibebaka ny Jiosy izany, nefa tsy izany no izy. Tsy nahomby indray ny vahoaka ary navelany ho voasambotra izy ireo.
Aiza ny fampanantenana izao? Ny olona niverina tany amin'ilay toerana nanombohan'i Abrahama. Taiza ny teny fikasana? Ny teny fikasana dia ao amin'Andriamanitra izay tsy mahay mandainga. Hanatanteraka ny fampanantenany izy, na manao ahoana na manao ahoana ratsy ny tsy fahombiazan'ny olona.
Andriamanitra dia nanomboka tamin'ny fomba faran'izay kely indrindra - toy ny embryon ao anatin'ny virijiny. Indro, homeko famantarana ianareo, araka izay nolazainy tamin’ny alalan’i Isaia. Bevohoka ny virijina ka hiteraka zazalahy ary homena azy ny anarana Immanuel, izay midika hoe "Andriamanitra miaraka amintsika". Izy anefa no nantsoina voalohany hoe Jesosy (Yeshua), izay midika hoe “Andriamanitra hamonjy antsika”.
Nanomboka nanatanteraka ny fampanantenany tamin’ny alalan’ny zaza tsy manambady Andriamanitra. Nisy fanilikilihana ara-tsosialy niraikitra tamin’izany — na dia 30 taona tatỳ aoriana aza, dia nanao fanehoan-kevitra manaratsy momba ny niandohan’i Jesosy ny mpitondra jiosy. 8,41). Iza no hino ny tantaran'i Maria momba ny anjely sy ny fiheverana mihoatra ny natiora?
Andriamanitra dia nanomboka nanatanteraka ny fanantenan'ny olony tamin'ny fomba tsy fantany. Tsy hisy olona ho afaka hilaza hoe io "zaza tsy ara-dalàna" io no ho valin'ny fanantenan'ny firenena. Tsy mahay manao na inona na inona ny zaza, tsy misy afaka mampianatra, tsy misy afaka manampy, tsy misy mahavonjy. Saingy ny zaza iray dia mety misy hery.
Nilaza ny anjely sy ny mpiandry ondry fa teraka tao Betlehema ny Mpamonjy (Lio 2,11). Mpanavotra, mpamonjy, fa tsy namonjy na iza na iza tamin'izany fotoana izany. Tsy maintsy novonjena mihitsy aza ny tenany. Tsy maintsy nandositra ny fianakaviana mba hamonjena ilay zaza tamin’i Heroda, Mpanjakan’ny Jiosy.
Fa io Andriamanitra tsy afa-bela io dia nantsoina hoe mpamonjy. Fantany izay hataon'ity zaza ity. Ny fanantenan'i Isiraely rehetra dia ao anatin'ity zaza ity. Ity no fahazavana ho an'ny Jentilisa; eto no fitahiana ho an'ny firenena rehetra; Inty ny zanak'i Davida izay hanjaka amin'izao tontolo izao; eto ny zanak'i Eva izay handringana ny fahavalon'ny olombelona rehetra. Fa zazakely ihany izy, teraka tamina stability, tandindonin-doza ny fiainany. Niova daholo anefa ny zava-drehetra tamin'ny fahaterahany.
Fony mbola teraka Jesosy dia tsy nisy fidiran'ny Jentily ho any Jerosalema ampianarina. Tsy nisy famantarana ny hery politika na ekonomika - tsy misy famantarana hafa ankoatry ny virjiny efa niteraka sy ny zaza - famantarana fa tsy hisy hino any Joda.
Tonga eo amintsika anefa Andriamanitra satria tsy mivadika amin'ny fampanantenany izy ary izy no fototry ny fanantenantsika. Tsy afaka hahatratra ny tanjon'Andriamanitra isika amin'ny alàlan'ny ezaka ataon'ny olombelona. Andriamanitra dia tsy manao zavatra araka ny fomba fieritreretantsika fa amin'ny fomba izay fantany fa miasa. Mihevitra ny heviny toy ny lalàna sy firenena ary fanjakana eto amin'ity tontolo ity isika. Andriamanitra dia mieritreritra ao amin'ny sokajy fanombohana kely, tsy fanoratana, ara-panahy fa tsy hery ara-batana, fandresena amin'ny fahalemena fa tsy hery.
Rehefa nomen'Andriamanitra an'i Jesosy isika dia nahatanteraka ny fampanantenany ary nanatanteraka izay rehetra nolazainy. Saingy tsy hitanay teo no ho eo ny fahatanterahan'izany. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy nino azy ary na ireo izay nino aza dia afaka manantena ihany.
Fantatsika fa nitombo i Jesôsy hanome ny fiainany ho avotra noho ny fahotantsika, mamela antsika, ho jiro ho an'ny Jentilisa, handresy ny devoly, ary handresy ny fahafatesana ny tenany amin'ny alàlan'ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Hitantsika hoe ahoana no fahatanterahan'i Jesosy ny fampanantenan'Andriamanitra.
Mahita zavatra betsaka lavitra noho ny hitan'ny Jiosy 2000 taona lasa izay isika, saingy mbola tsy hitantsika izay rehetra misy. Tsy mbola hitantsika fa efa tanteraka ny fampanantenana rehetra. Mbola tsy hitantsika akory fa voafatotra i Satana ka tsy hamitaka ny olona intsony. Mbola tsy hitantsika akory hoe mahalala an'Andriamanitra daholo ny olona rehetra. Mbola tsy hitantsika ny fiafaran'ny hiaka, ranomaso, fanaintainana, fahafatesana ary fahafatesana. Mbola andrasantsika ny valiny farany - saingy ao amin'i Jesosy dia manana fanantenana sy fahatokisana isika.
Isika dia manana toky iray nomen'Andriamanitra, amin'ny alàlan'ny Zanany, nofehezin'ny Fanahy Masina. Mino izahay fa ho tanteraka ny zava-drehetra, fa i Kristy no hanatanteraka ny asa izay natombony. Afaka matoky isika fa ho tanteraka ny fampanantenana rehetra - tsy voatery amin'ny fomba nantenaintsika fa tsy amin'ny fomba noheverin'Andriamanitra.
Hanao fampanantenana amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy Zanany Izy. Tsy tiantsika ny hahita izany ankehitriny fa efa mihetsika Andriamanitra ary miasa ao ambadiky ny sehatra mihitsy Andriamanitra hanatanterahana ny sitrapony sy ny drafiny. Tahaka ny nanananay fanantenana sy fampanantenana famonjena ao amin'i Jesosy, fony mbola zazakely isika, dia toy izany koa isika manana fanantenana sy fampanantenana ny fahalavorariana ao amin'i Jesosy nitsangana. Isika koa dia manana an'io fanantenana io amin'ny fivoaran'ny Fanjakan'Andriamanitra, ho an'ny asan'ny Fiangonana sy amin'ny fiainantsika manokana.
Rehefa mino ny olona dia manomboka mitombo ao anatiny ny asany. Jesosy dia nilaza fa tsy maintsy ateraka indray isika ary rehefa mino isika dia manalavitra antsika ny Fanahy Masina ary mamorona fiainana vaovao ao amintsika. Tahaka ny nampanantenain'i Jesosy dia tonga ao amintsika Izy hitoetra ao amintsika.
Nisy olona nilaza indray mandeha hoe: "Jesosy afaka nateraka in-1000 ary tsy hahomby amiko raha tsy teraka ato amiko izy." Ny fanantenana entin'i Jesosy ho an'izao tontolo izao dia tsy misy ilana antsika raha tsy ekentsika ho fanantenantsika. Isika tsy avelantsika hiaina ao anatintsika.
Tianay ny mijery ny tenantsika ary mieritreritra hoe: «Tsy dia hitako any. Tsy tsara lavitra noho ny 20 taona lasa aho. Mbola miady amin'ny ota, fisalasalana ary meloka aho. Mbola fitiavan-tena sy mafy loha aho. Tsy tsara lavitra noho ny maha-olona masina ahy noho ny taloha i Isiraely. Manontany tena aho raha tena manao zavatra tokoa amin'ny fiainako Andriamanitra. Toa tsy nanao fandrosoana mihitsy aho. »
Ny valiny dia ny fahatsiarovana an'i Jesosy. Ny fanombohantsika vaovao ara-panahy dia mety tsy mitondra fiovana tsara amin'izao fotoana izao - fa kosa, satria izany no lazain'Andriamanitra. Ny ananantsika ao dia fandoavam-bola fotsiny. Fiandohana izany ary antoka avy amin'Andriamanitra mihitsy. Ny Fanahy Masina dia nandoa ny vola izay ho avy.
Jesosy dia milaza amintsika fa ny anjely dia mifaly isaky ny miova ny mpanota. Mihira momba ny olona rehetra mino an'i Kristy izy ireo satria teraka ny zazakely. Mety tsy nanao zavatra lehibe ity zaza ity. Mety misy ny ady atao, fa zanak'Andriamanitra ary Andriamanitra dia hahita fa vita ny asany. Izy hikarakara antsika. Na dia tsy lavorary aza ny fiainantsika ara-panahy, dia mbola hiasa foana isika mandra-pahavitan'ny asany.
Tahaka ny fanantenana be an'i Jesosy amin'ny zaza, dia misy fanantenana lehibe ho an'ny Kristiana zazakely. Na manao ahoana na manao ahoana ny maha-kristiana anao dia misy fanantenana lehibe ho anao satria Andriamanitra no nametraka tao aminao - ary tsy ho foiny ny asa natombony.